Dhaqan xumadii lagu Yaqaanay Siyaasiyiinta Soomaalida oo Durba Ka Dhex Muuqatay Baarlamaanka Cusub - Maqaal
Dhaqan xumadii lagu Yaqaanay Siyaasiyiinta Soomaalida oo Durba Ka Dhex Muuqatay Baarlamaanka Cusub – Maqaal
Updated About:267 days ago 2
Cali Khaliif Galeyr oo game siyaasadeed fool xun la ciyaaray Baarlamaanka.
Maxaa shalay maanta uga eg? Siyaasiyiinta soomaalidase maxaa iska bedelay? Waxaa lagu naadiyey dowladd cusub, ku meel gaar ka bixid iyo qarannimo buuxdo. Laakiin raadka muuqdaahi waa mid rajo xumo ku ridaayo dad badan oo hamuun u qabo in ey mar uun arkaansoomaalia oo cagaheeda isku taagtay.
Waxaan la wada soconaa buuqii iyo wax is daba mariskii lagu sameeyey soo xulista baarlamaanka. Geedi socodkii siyaasada soomaaliya waxaa maroorsaday lix saxiixeyaal iyo beesha caalamka oo ku heshiiyey wax lagu magacaabay rood maab. Waxey dhexdooda ku heshiiyeen in baarlamaan cusub oo xalaal ah lasoo dhiso lana soo doorto madaxweyne si loo dhiso dowlad aan kmg aheyn.
Kuraastii Baarlamaankii waa la kala boobay
Odayaasha dhaqanka soomaalida ayaa loo xilsaaray in ey soo xulaan xubnihii ku fariisan lahaa kuraasta golaha shacabka loo gumase simin.Gudi cid walbo ka awood badan, xataa saxiixeyaasha ayaa odayaashii la dul dhigay.
Gudiga sidey wax yeeleen waa la wada arkay.meel airporkaMuqdisho u dhow ayey isku soo xireen kadibna cidii ey doonaan ayey kursi ka siiyeen baaarlamaanka. Waxaa la arkay dad eysan odayaashu soo magacaabin oo la dhaariyey dadkii ey soo magacaabeena qaar waa ladiiday.
Deg degu door ma leh
Mudo sanad ah ayaa lees kar kabeynaayey. Meesha ba waxaa ku amar ku taagleeyey Mahiiga oo beesha caalamka matalo. Waxaa la yiri waa in destuurka deg deg lagu ansixiyaa (9 maalmood) waxaa la yiri waa in xildhibaanada deg deg lagu soo magacaa baa. Waxaa la yiri waa in deg deg lagu doortaa gudoomiye baarlamaan iyo kuxigeeno. Taas waxey dhashay in wax walbo lagu sameeyo si indho la’aan ah. Lana soo xulo dad lagu qaraabanaayo. Malaha waxaa la dhibsaday nabada iyo dowladnimada soo bidhaameyso. Oo waxaa la rabaa in la xagal daaciyo.
Fal fal xumadii siyaasiyiinta soomaalida oo ka soo bidhaantay baarlamaanka cusub
Iyadoo laga wada anfariirsanaa qaabkii lagu soo xulay xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxaa dad badan u muuqatay in eysan wax badan isbedelin kadib markii ey arkeen qaabkii ey u dhacday doorasshada gudoomiyaha baarlamaanka.
Ugu horeynba gudiga doorashada waxey meesha soo dhigeen xujo ah ninkii aan sedex kun oo doolar heysan in owsan meesha isku soo lug goynin oo aan loo ogolaan doonin is sharixid. Taas waxaa loo arkay xujo iyo taako loo dhigay xildhibaanada leh waaya aragnimo iyo aqoon ku filan si ey xilkaas u qabtaan laakiin aan heli karin sadex kun oo doolar.
Waxaa xigay rag intey isa soo sharaxeen hadana ka noqday maalin ka dib. Raggaas waxey ku mudaceen in ey tanaasuleen. Waa yaab! Tolow yey u tanaasuleen? Waxaa u dhaantay in ey yiraahdaan waxaan fahmnay in aannala dooran doonin. Waxaase kasii daran warbaahinta soomaalida oo arrinkaas u ekeysiineyso in ragas ey sameeyeen ixsaan. Waxey ku celcelinaayaan in hebel uu ka tanaasulay musharax nimadiisii.
Waxaase kasii daran markii la gaaray doorashadii gudoomiyaha iyo sidii ey u dhacdday. Hadii aan soo koobo Cali Khaliif waxuu noqday ninka labaad ee ugu codka badan kadib wareegii koowaad. Waxaana isku soo haray isaga iyo ninkii ka codka badnaa, laakiin waxaa fajiciso noqotay in uu Cali sheego in uu tanaasulay. Taas oo dad badan niyad jebisey. Sheekada oo dhanna u ekeysiisey mid khiyaali ah.
Suaashu waxey tahay sidee ku dhici kartaa nin intaas oo cod iyo kalsooni ah ka helay xildhibaano badan in uu yiraahdo waan tanaasulay weliba kadib markii kuwii kale hareen? Waxey u muuqataa in Cali Khaliifmarkiisii horaba uusanba diyaar u aheyn in uu noqdo gudoomiye baarlamaan oo uu meesha u yimid si uu u ciyaaro game siyaasadeed. Sababtoo ah sidee isu casili karaa markuu arkay in dadkii la tartamaayey wada hareen mid maahee? Fursadna uu u heysto in uu ku guuleysto xilka., Sow khiyaano kuma ahan arrinkaas dadkii codka siiyey? Waxaa laga yaabaa in ey codkooda siisan lahaayeen cid kale hadii ey u cadaan laheyd in ninkaan uusan diyaar u aheyn in uu gudoomiye noqdo.
Wax cusub ma ahan in siyaasiyiinta soomaalidu isa soo sharaxaan oo hadana yiraahdaan waan is casilay laakiin waxaan filayaa weli ma dhacin in uu tanaassulo ruux fursad cad u heysto ku guuleysashada xilka loo tartamaayo Cali ka hor.
Cid walbo oo ku hamineysey in ey wax weyn is bedeli doonaan kadib xilliga kala guurka waxaa niyad jab ku ridey qaabka ey wax ku biloowdeen kuna socdaan. Qowmna ilaahey ma bedelo xaalkooda hadeysan bedelin nafsadooda sidey tahay. Hadii xilkasnima xumida iyo laxajeclada siyaasiyiinta soomaalida oo mid walbo rabo kursiga dalka ugu sareeyo eysan waxba iska bedelin, waxaa xaqiiqo ah in eysan wax weyn iska bedelim doonin xaalka dalka kadib xilliga kala guurka.
saciid cabdalla . saciid31@hotmail.com
Mahamd says:	August 31, 2012 at 10:03 am	Websatka midnimo waxan u arka mid muda somaliyeed kala fogena ama siyasiinta somlyd midba wax ka shegayo shabku wey dalen wadankuna daley!
Reply	Muhsin says:	August 31, 2012 at 8:15 am	Salaan kadib waxan ahay aqristayaalka midnimo waxaan jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo in aduunka oo dhan ineysan jirin qof somali qof aamini karo taasina waxaa keenay dhaqanka laga tagay odayaalkii jiray taariiqdi hore xaaraanta wey iska dhoori jireen hadase wax xaaran iska ilaaliya ayaa yar xataa markaad tagto masaajidada ku wada yaala dunida dacaladeeda dad somali ayaa imaan ka noqan jiray hadase laga qaaday waxase la mid ah lacag haye iyo xisaabiye waan ka xumahay arimahaasi !
Axmed Madoobo oo doowlada Soomaaliya eedeyn usoo jeediyay